Soomaalida oo si daran loogu xasuuqayo Cape Town | KEYDMEDIA ENGLISH
Soomaalida oo si daran loogu xasuuqayo Cape Town
Soomaalida ku nool Koonfur Afrika waxaa si diblomaasiyadeed uga wakiil ah safaaradda Soomaaliya ee Pretoria, hayeeshee, ma jirto wax ay ka qabato dhibaatada joogtada ah ee lagu hayo muwaadiniinta ku sugan dalkaas, kuwaas oo dil dhac u joog ah xilli kasta.
CAPE TOWN – Beegsiga iyo dilka muwaadiniinta Soomaaleed ee ku dhaqan dalka Koofur Afrika ayaa wali sii socda, xilli ku dhawaad lix ruux lagu dilay dalkaas tan iyo jimcihii, taasoo cabsi xooggan ku abuurtay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan South Africa.
Allaha u naxariistee, Yaasiin Cumar iyo Yuusuf Jowhar, ayaa xalay lagu toogtay degaanka Khayelitsha oo hoos tagta magaalada Cape Town, xilli ay ku sugnaayeen tukaankooda, waxaana lala dilay muwaadin u dhashay dalka dhaca koonfur-bari Afrika ee Malawi.
Maalin ka hor, ayay ahayd markii Allaha u naxariistee, Cali Maxamed Xasan (Balaakii), lagu dilay degaanka Nyanga oo isna hoos taga Magaalada Cape Town, kaasoo burcad hubeysan toogteen, si ay uga dhacaan gaarigiisa Rootiga uu ku wareejin jiray.
Sidoo kale, Allaha u naxariistee Cabdirashiid Axmed Shiiq Muxudiin iyo Mowliid Axmed Cadde, ayaa jimhihii lagu dilay degaanka Strand oo isna hoos taga Cape Town, kadib weerar ay koox burcad ku qaadeen labo tukaan ay ganacsato Soomaaliyeed lahaayeen.
Sida ay Keydmedia Online, u sheegeen ganacsato ku sugan gobolka Western Cape oo ah halka ugu daran ee hadda Soomaalidu ku wajahayaan beegsiga, ayaa xaqiijiyay in aysan jirin dad boolisku u soo qabtay falalkaan arxan-darrada ah, taasii sii siyaadisay cabsida.
In ka badan, 50 qof oo Muwaadiniin Soomaali ah ayaa la sheegay in dalkaas lagu dilay sanadkii hore, hayeeshee, xogaha hordhaca ah ee dilalka sanadkaan ayaa mujinaya in ay ka badnaan karaan tiradii sanadkii hore haddii beegsigu sidaan joogto u sii ahaado.
Soomaalida ku nool Koonfur Afrika waxaa si diblomaasiyadeed uga wakiil ah safaaradda Soomaaliya ee Pretoria, hayeeshee, ma jirto wax ay ka qabato dhibaatada joogtada ah ee lagu hayo muwaadiniinta ku sugan dalkaas, kuwaas oo dil iyo dhac u joog ah xilli kasta.
Guddiga Jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika (SCBSA) ayaa hore safaaradda iyo Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ku eedeeyay in ay indhaha ka daboosheen dhibaatooyinka ay wajahayaan muwaadiniinta ka xamaasha South Africa.
UNHCR waxay siisaa taageero farsamo iyo mid dhaqaale Dowladda Jamhuuriyadda Koonfur Afrika si kor loogu qaado ilaalinta qaxootiga iyo magangelyo-doonka, yeelkeede, in ka badan 30,000 oo Soomaaliya ayaa cabsi ku nool ku ah dalkaas amani la’aan awgeed.